Sacuudiga oo Maxabiis ku dilay Duqeyn Xabsiyada Xuuthiyiinta • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga oo Maxabiis ku dilay Duqeyn Xabsiyada Xuuthiyiinta
Sacuudiga oo Maxabiis ku dilay Duqeyn Xabsiyada Xuuthiyiinta
December 14, 2017 - By: Hanad Askar
Ugu yaraan 35 maxbuus oo ku jiray Xabsi ay maamulaan Xuuthiyiinta Yemen ayaa lagu dilay duqeyn ay geysteen diyaaradaha Sacuudiga Arbacadii shalay.
Waxaa jira warar is khilaafsan oo kasoo baxaya magaalada Sanca ee Yemen iyo goobta la duqeeyey oo Xabsi u ahayd kooxda Xuuthiyiinta, waxaana la sheegay inay xabsigaasi ku jireen ugu yaraan 180 maxbuus.
Xuuthiyiinta ayaa ku eedeeyey Sacuudiga duqeynta ka socota magaalada Sanca iyo dhulka ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadkaasi Shiicada ah.
Diyaaradaha Sacuudiga ayaa todobaadkan sidoo kale duqeeyey Xaruntii Madaxtooyada ee Sanca.
Dagaalka ka socda Yemen ee bilowday 2015 kadib markii xuuthiyiinta ay la wareegeen gacan ku heynta caasimada Sanca, ayaa keenay in bishii Maarso ee isla sanadkaasi ay dagaalka kusoo biiraan Xulafada Sacuudiga oo duqeynmo xoogleh ka geystay wadankaasi.
In ka badan 10.000 rayid ah ayaa la rumeysan yahay inay dagaaladaasi ku dhinteen iyadoo illaa iyo hada uusan jirin dhinac sheegan kara wax guul ah inuu dagaalkaasi ka gaaray.
Dalka Yemen oo weli kala qeybsan ayey shacabka ku nool xiligan lasoo daristay macaluul iyo cudurada faafa sida daacuunka oo khatar weyn ku haya shacabka dalkaasi. Dad gaaraya 8 milyan oo wadankaasi ku nool ayaa la sheegayaa inay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan gaajo, sida ay baahiyeen hay’ada gargaarka iyo Qaramada Midoobay.